Indhacadde: “Shaakir iyo Maxamuud waa kaankare” | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Somaaliya - Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad "Indhacadde" oo ka mid ah howl-gabka Ciidanka Xoogga Dalka, isla-markaana soo noqday Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, ayaa si adag kaga hadlay dagaalka maalintii 3-aad galay ee ka holcaya Guriceel.
Jeneraal Yuusuf, oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho, ayaa sheegay in Kooxda Ahlu-sunna ay noqotay koox ku gorgortanta siyaasadda xilliyada doorashooyinka, wuxuuna ku tilmaamay Kaankare ay qasab tahay in la gooyo.
“Saddex Xukuumadood iyo saddex Madaxweyne ayaa hore u la heshiisay, oo garaaddo, kuraas iyo lacag siiyay, sidaas daraaddeed nimankaan wadahadal kuma qancayaan, xitaa Galmudug haddii la siiyo ma qancayaan, waa fidno iyo kaankare, kaankarana in la gooyo maahane xal kale malaha’. Ayuu yiri Jeneraal Indhacadde.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, ayuu ugu baaqay inuu ka shaqeeyo sidii uu ku soo af-jari lahaa SUFA, oo uu sheegay in ay caqabad ku yihiin jiritaanka Galmudug, nidaamka dowladnimada iyo kala danbeynta sharciga ah.
Wuxuu ku taliyay in waddooyinka ciidanka Ahlu-sunna uu gurmadku uga imaanayo la jaro, sida jidadka aada Caabdud-qaaq, Balanbal iyo Xeraare.
“Madaxweyne Qoorqoor, waa in uusan amniga Galmudug gorgortan ka galin, haddii Al-Shabaab tahay iyo haddii ay SUFA tahay, waana ku garab taagan-nahay hiil iyo hooba” ayuu yiri, Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad.
Shacabka Galmudug, ayuu ugu baaqay in ay ilaashadaan nidaamka dowladda, isla-markaana garab istaagaan Ciidanka xoogga dalka ee dagaalka kula jira kooxda uu nabad-diidka ku tilmaamay ee Shaakir iyo Maxamuud hoggaamiyaan.
Indhacadde, wuxuu soo noqday guddoomiyaha gobolka Shabeellada hoose, ka hor inta uusan isbahaysi la sameysan Maxkamadihii Islaamka, wuxuu soo noqday Wasiirka Difaaca ee Dawladdii Ku Meel Gaarka ahayd, wuxuuna xilli ka mid ahaa hoggaankii Ururkii Xisbul Islaam, oo dhibaatooyin xooggan ka geysatay Koofurta iyo bartaha Soomaaliya.